एमाओवादी लुटतन्त्रमा लागेको छ :: माधव नेपाल – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १५:०७ English
० तपाईंको विचारमा नेपालको भावी प्रधानमन्त्री को हो ?
– यो प्रश्न मसँग नगर्नुस्, अहिले यो प्रश्न एकीकृत नेकपा माओवादीसँग सोध्नुस् । संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग यो प्रश्न सोध्नुस् । एमालेसँग यो प्रश्न सोध्ने होइन । एमालेले त संस्थागत रुपमै निर्णय गरिसकेको छ । मैले नै प्रस्ताव गरेको हुँ सुशील कोइरालाको नाम । मैले आफ्नो तर्फबाट चार पार्टीको बैठकमा प्रस्ताव नै राखिसकेको छु । अनिर्णित भएको बेला मात्र यो प्रश्न सोध्ने हो ।
० सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने आधारहरु छन् ?
– एकीकृत नेकपा माओवादीले नेपाली काग्रेससँग प्रधानमन्त्रीको नाम माग्यो । माओवादीको मागलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेसले निर्णय पनि गर्यो । अब माग पुरा भएपछि कोही पनि पछि हट्नु हुँदैन । प्रचण्डले आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्नको लागि र पार्टीहरुसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई कायम राख्न पनि आफ्नो बचनमा अड्नु पर्दछ । धेरै ‘इफ’ एण्ड ‘बट’ लगाउनु हुँदैन । नयाँ–नयाँ तर्क जोडेर पेचिलो बनाउनु हुँदैन । एमाले र माओवादीले दुई–दुई पटक नेतृत्व गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले पनि नेतृत्व गर्न पाउनु पर्छ । अहिले सुशीलजी प्रधानमन्त्री हुने आधारहरु यिनै हुन् । अहिले माओवादीले भनेजस्तो संविधानका अन्तरवस्तुमा जान सकिँदैन । अहिले भनेको सहमति भइसकेको विषयलाई दस्तावेजको रुप दिएर अघि बढ्न सकिन्छ ।
० तर सुशील कोइराला त प्रधानमन्त्रीको नयाँ सर्तका कारण तपाईंहरुले भनेको समयमा प्रधानमन्त्री त बन्न सक्नुभएन नी ?
– प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सत्ता छाड्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न । त्यसैले उहाँले एकमाथि अर्को सर्त थोपरिरहनु भएको छ । तर म यो घोषणा गर्न चाहन्छु कि उहाँले छाड्नै पर्छ, सहमतिको लागि मार्ग प्रसस्त गर्नै पर्छ । अन्यथा त्यसको गंभिर परिणाम भोग्न तयार हुनुपर्छ । उहाँले सहमतिको बातावरण विगार्नुभयो भने त्यसको सजाय उहाँले पाउनुहुन्छ । उहाँ जनताको नजरमा कहिल्यै पनि नउठ्ने गरी गिर्नुहुन्छ । नभए सुशीलजीको नाममा कुनै आपत्ति भए बैठकमा बुँदागत रुपमा छलफलका लागि प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो । पछि संविधानसभामा छलफल गर्नुपर्ने विषय अहिले उठाएर अवरोध खडा गर्नुको दोष माओवादी र त्यसको मतियार मधेसी मोर्चाले लिनुपर्छ ।
० एमाओवादीको सर्त मान्ने कि नमान्ने त ?
– कसैको वेतुकका सर्त मान्ने कुरा आउँदैन । के–के गर्ने हो त्यो विषयमा छलफल हुनुपर्छ । अहिले गर्नुपर्ने विषय भनेको संविधानमा विगतमा भएका सहमतिहरु लिपिवद्ध गर्नु पर्छ । सहमति नभएको संघीयता र शासकीय स्वरुप सहमति भएको छैन त्योपछिको छलफलको विषय हो । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिताप्रति हामी सबैको सहमति स्पष्ट छन्, त्यसमा आशंका गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । जहाँसम्म निर्वाचन गर्दैनन् कि भन्ने आशंका छ भने संविधानमा संसोधन गरेर निर्वाचन गराउने मिति र प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
० बैशाखमा निर्वाचन हुन सक्छ ?
– दलहरुवीच पुस १५ गतेसम्म सहमति भए निर्वाचन हुनसक्छ । निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनेपछि हामिले आशंका गर्ने आवश्यकता छैन । दलहरु मिल्ने हो र राज्यको सबै संयन्त्रको प्रयोग गर्ने हो भने दुई महिनामा चुनाव हुन सक्छ । कुन ठूलो कुरा छ र ? चुनावलाई हाउगुजी बनाउनु हुँदैन । जापानमा दुई महिनामा चुनाव हुन्छ । अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगको कारणले होइन राजनीति गतिरोधका कारण चुनाव हुन नसकेको हो । माओवादीले नचाहेकोले चुनाव नभएको हो यस्तै रहे देश बर्बाद हुन्छ । मलाई एमाओवादी पार्टी र प्रचण्डले बैशाखमा चुनाव चाहेको छ जस्तो लाग्दैन । माओवादीले नचाहे चुनाव हुन सक्दैन । नत्र त चुनाव हुन कुनै अप्ठ्यारो छैन ।
० सहमति नभए प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई रहिरहनु होला त ?
– अहिले यति भनौँ मुलुकमा ठूलो दुर्घटना हुन्छ । बाबुरामजी पनि जानुहुन्छ, मुलुकमा पनि दलहरुको हातबाट जान्छ । त्यसपछि के हुन्छ भन्न सकिदैन । माओवादीले दुर्घटना नै खोजिरहेकोले अरु दलहरुले यसबाट डराउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।
त्यसको अर्थ राष्ट्रपतिले अब कदम चाल्ने बेला भयो ?
अहिले नै कदम चाल्नु पर्छ भनेर भन्दिनँ । बाबुरामजीले छाड्नुहुन्न, माओवादी छाड्न चाहन्न भने त्यस्तो अवस्थामा दुर्घटनामा देश जाने निश्चित छ । आज माओवादी पैसा कमाउन तिर लागेको छ, भोली दुर्घटना भयो भने उहाँहरुलाई सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी हुन्छ । संसारमा धेरै कुरा अप्स एण्ड डाउन देखेका छौँ । हेर्दै जाऔँ के हुन्छ ? धेरै सत्ताप्रेमीको बुरा हालत देखेका छौँ । भोलीका दिनमा अहिले सत्तामा टिकेर अकुत भ्रष्टाचार गर्नेहरु सबै फेला पर्छन् ।
० अहिलेकै सरकारमा सबै गएर फेरि सुशील कोइरालालाई समाचार बनाउने भन्ने कुरा आएको छ नि ?
– त्यो हुन सक्दैन, बाबुरामजीको नेतृत्व हामीलाई स्विकार्य छैन । हामी यो सरकारमा जाँदैनौ । यो कुरा पत्थरको लकीर हो । एमालेको स्पष्ट पोजिसन हो त्यो । दशहजार पटक कुरा उठाए पनि त्यो एमालेलाई स्विकार्य छैन ।
६ पुष २०६९, शुक्रबार १३:४३ मा प्रकाशित
गण्डकीमा थप २५२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण	१० कार्तिक २०७७, सोमबार १५:३२
चिर्पट प्रहार गरेर श्रीमतीको हत्या	१० कार्तिक २०७७, सोमबार १५:२७
सभापति देउवाद्वारा घरडेरामै सीमित रहेर पर्व मनाउन आग्रह	१० कार्तिक २०७७, सोमबार ०८:३७